ဟာဇက် ကို လိုက်နေတဲ့ ငှက်ကြား ၊ လီဗာပူးက ထွက်နိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၊ ရစ်ချလီဆင် ရဲ့ တန်ကြေး တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဟာဇက် ကို လိုက်နေတဲ့ ငှက်ကြား ၊ လီဗာပူးက ထွက်နိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၊ ရစ်ချလီဆင် ရဲ့ တန်ကြေး တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
နွေရာသီမှာ ကစားသမားသစ်တွေ အများအပြား ခေါ်ယူဖု့ိ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပိုင်ရှင်သစ် နဲ့ နယူးကာဆယ် ဟာ ဒေါ့မွန် အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ တောင်ပံ ကစားသမား သော်ဂန်ဟာဇက် ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစား လာနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ နာမည်ကျော် ဂျာနယ်လစ် ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ဂျာမန် သတင်းဌာန နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် နယူးကာဆယ် ဟာ ဘရာဇီး ကလပ် ဆန်းတိုစ့် မှာ ကစားနေတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် ဘရာဇီးလူငယ်လေး အန်ဂျလို ဂါဘရီရယ် ကို စောင့်ကြည့် နေပြီး ၁၈ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ လက်ဦးမှု ရယူကာ ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နည်းပြ အက်ဒီဟောင်း အနေနဲ့ အလိုရှိတဲ့ ကစားသမား အတော်များများကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါက ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေဖို့ အတွက် အသင်းရဲ့ လုပ်ခ အများဆုံး ကစားသမား တယောက် ဖြစ်တဲ့ ရှေ့တန်းလူ အလန် စိန့် မက်ဆီမင် ကို ရောင်းချ သွားချေ ရှိတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ထိပ်သီးအသင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အေစီမီလန် ၊ အင်တာမီလန် နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ဟာ ဘာစီလိုနာ က ရောင်းထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ နောက်ခံလူ ကလီးမန့် လန်းလတ် ကို စောင့်ကြည့် နေကြတယ်လို့ ကတ်တလန် အခြေစိုက် SPORT သတင်းစာက ဖော်ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး တောင်ပံ ကစားသမားဟောင်း စတီးဝတ် ဒေါင်းနင်း က ရော်ဘတ်တို ဖာမီနို ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ လီဗာပူး ကနေ ထွက်ခွာ သွားနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သုံးသပ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လေဗာကူဆင် အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဖလော်ရီယန် ဝတ်ဇ် ကို ၂၀၂၇ ခုနှစ် အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ ဘန်လေ ဂိုးသမား နစ်ပုပ် ကို ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် ပြီးစီး ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာ ကြေညာ သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အခြား ဂိုးသမား အပြောင်းအရွှေ့တွေ မှာတော့ ဒင်း ဟန်ဒါဆင် ဟာ မန်ယူနိုက်တက် ကနေ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် ကို ရောက်ရှိဖို့ အချိန်အနည်းငယ်သာ လိုတော့ပြီး ယူနိုက်တက် ကတော့ ဘတ်ချ်မန်း ကို ခေါ်ယူ အစားထိုးဖို့ လုပ်ဆောင် နေပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း ကလည်း PSG ဂိုးသမား အေရိုလာ ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး အသင်းကလည်း အာမေးနီးယား ဘီလက်ဖီး အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား စတီဖန် အော်တေဂါ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေပြီး ကစားသမား နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုပင် ရယူထားပြီးပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စီးတီး ရဲ့ အမေရိကန် ဂိုးသမား ဇက်စတီဖန် ကို ရောင်းထုတ်ပြီးမှသာ ခေါ်ယူဖို့ အလားအလာ များတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ပေါလ်ပေါ့ဘာ ရဲ့ အေးဂျင့် နဲ့ ယူဗင်တပ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းက တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပြီး အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စကို အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ကြပြီလို့ သိရပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ဘရန့်ဖိုဒ့် တို့ဟာ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဆီက ဆုံးဖြတ်ချက် အဖြေကို စောင့်ဆိုင်း နေကြပြီး တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကတော့ ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျသွားပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဘရာဇီး တိုက်စစ်မှူး ရစ်ချလီဆင် အတွက် အနိမ့်ဆုံး အဖြစ် ပေါင် သန်း ၅၀ ဈေးသတ်မှတ် လိုက်တယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကစားသမား အချို့ ဟာ ရောဘတ်လီဝန်ဒေါ့စကီး နဲ့ ကလပ် အသင်းတို့ ရဲ့ အခြေအနေတွေ အပေါ် စိတ်ပျက် နေကြပြီး လီဝန်ဒေါ့စကီး အပေါ်လည်း ငြိုငြင်မှုတွေ ရှိလာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြ အဲရစ်တန်ဟတ် ဟာ နောက်ခံလူ ဘရန်ဒွန် ဝီလ်ယံ ကို ပေါင် ၁၀ သန်း မျှနဲ့ ရောင်းချ သွားနိုင်တယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အော့စမိန်း ဒမ်ဘီလီ ဟာ ဘာစီလိုနာ မှာ ဆက်နေမလား ၊ အခြားအသင်းတသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ မလားဆိုတာကို လာမယ့် ရက်အနည်းငယ် အတွင်း မဖြစ်မနေ ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လတ်တလော မှာတော့ ကစားသမား ဟာ နူးကမ့် မှာ ဆက်ရှိဖို့ အလားအလာနည်းနေပြီး PSG ကို ရောက်ဖို့ ရာနှုန်းများနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လာလီဂါ ထိပ်သီး ကလပ် အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ အင်တာမီလန် ကို ရောက်လုနီး ဖြစ်နေတဲ့ ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ပေါ်လို ဒိုင်ဘားလား ကို ကြားဖြတ် ခေးယူဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရပါတယ် ။
မန်စီးတီး အမျိုးသမီး အသင်းကနေ ထွက်လာပြီး ဘာဆာ အမျိုးသမီး အသင်းဆီကို အလွတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တဲ့ လူစီဘရွန့်ဇ် က သူမ ဟာ အသင်းဟောင်း လိုင်ယွန် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ပယ်ချပြီး စပိန်ကို ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန် လိုက်တဲ့ ဖီဖာ ရဲ့ လက်ရွေးစင် အသင်း ရပ်တည်မှာမှာ ဘရာဇီး ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁ နေရာကို ဆက်လက် ရယူထားပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ ကလည်း အဆင့် ၂ နေရာမှာ ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။
Finalissima မှာ အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနား ကတော့ ၁ ဆင့်တက်လာခဲ့ပြီး ပြင်သစ် ရဲ့ အဆင့် ၃ နေရာကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . ။
Previous Article တန်ဟတ် လက်အောက်မှာ ဘာတွေ လုပ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာ ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ဒါးလော့
Next Article အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြောင်းရွေ့လာရန် မန်စီးတီး ပစ်မှတ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဂျွန်အိုရှေး